‘बल्ब खरिद’बारे उर्जामंत्रीको जवाफ : ‘आरोप पुष्टि गर्नुस्, म राजनीति छाडिदिन्छु’ | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
‘बल्ब खरिद’बारे उर्जामंत्रीको जवाफ : ‘आरोप पुष्टि गर्नुस्, म राजनीति छाडिदिन्छु’
बल्ब खरिदबारे उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग लिएको अन्तर्वार्ता :
बल्ब खरिदको विवाद के हो ?
म त चुनावका लागि रुकुममा छु । मैले मेरा कुरा पत्रकार सम्मेलन गरी भनिसकें । तिनै हुन् मेरा कुरा । यो प्रक्रियामा कसैले एक पैसा पाउने पनि छैन, गर्न दिने पनि छैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो । यो विषय उछाल्नेलाई मैले केही भन्नु छैन ।
३८ भारुको बल्ब ६५ मा किन खरिद गर्न लागिएको हो नि ?
यो भारतलाई सोध्नु न, भारतकै कम्पनीलाई सोध्नु । कति भन्छ, उसैलाई सोध्नुस् । यसलाई उछाल्ने काम नगर्नुस् । यो कमिसन खाने कुरा होइन । एक पैसा कसैले खायो भने त्यसको सजाय म भोग्न तयार छु । देशलाई राम्रो हुने काम गर्दा कसैलाई अनावश्यक फाइदा हुन्छ भने केही छैन । सत्य कुरालाई सत्य भनौं । ३८ हो कि ४० हो कि त्यो कम्पनीलाई सोधौं न । कसैको चुनावी उद्देश्य पूरा गर्न ल्याइएको विवाद हो, यो । आरोप प्रमाणित गर्नुस् । विद्युत् प्राधकरणका कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) घिसिङले ल्याएको प्रस्ताव हो यो । दुई देशका सचिवबीच छलफल भएको छ । दुई देशबीच सम्झौता भएको छ । यस्तो स्पष्ट कुरालाई पनि उछाल्ने ? किन ?
प्रक्रिया किन छलेको नि ?
यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटूजी)को प्रक्रिया हो । प्रक्रिया भनेको यही हो । देशको माया मलाई पनि छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लडेको मान्छे हुँ म पनि । लडि पनि रहेको छु । मैले गाडी चढेको देख्ने, लोडसेडिङ अन्त्य भएको नदेख्ने ? मैले भाषण गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देख्ने ? निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएको नदेख्ने ? मलाई किन यस्तो गर्न खोजिएको हो ? तपाईंहरुले लगाउनुभएको आरोप पुष्टि गर्नुस्, म राजनीति छाडिदिन्छु ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिष्पर्धा गराएर ल्याएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ?
जसरी प्रतिष्पर्धा गराउने व्यवस्था छ, त्यसरी नै प्रतिष्पर्धा नगराउने व्यवस्था पनि छ नि । केही व्यवसायी पनि आएका थिए, दिन्छौं भन्दै । मैले उनीहरुलाई भनें, ‘ल ल्याऊ अहिलेको अहिल्यै दुई करोड बल्ब । दिन्छौ ? त्यहि गुणस्तरको चाहिन्छ ।’ प्रतिस्पर्धा गर्नेले त्यही गुणस्तरको दिनुप¥यो नि । ६ महिना, वर्ष दिन लगाएर हुन्छ ? दुई करोडले मात्रै पुग्दैन । दस करोड बल्ब चाहिन्छ । अब अर्को प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउने नै हो । लेख्नु तपाईंहरुको स्वतन्त्रता हो । तर कान्तिपुरले मैले भनेको कुरा नलेख्ने, नभनेका कुरा लेख्ने ? मैले विचार गरिरहेको छु नि, पुष्टि गरोस् कान्तिपुरले, म राजनीति छाडिदिन्छु ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित